कोरोनाका सक्रिय संक्रमित घटे, यी २ जिल्ला संक्रमणमुक्त - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं : देशभरमा आज मङ्गलबारभन्दा ७७ जना सक्रिय सङ्क्रमित घटेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार ४९० जना सङ्क्रमित हुँदा एक हजार ५६७ जना सङ्क्रमणमुक्त भएकाले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम भएको छ ।
आजसम्म निको हुने दर ९२ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । आजसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १६ हजार ५४७ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पीसीआर परीक्षणमध्ये सङ्क्रमण दर १३ दशमलव पाँच प्रतिशत छ । योसँगै जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख ३६ हजार २४६ पुगेको छ ।
याे पनि पढ्नुस थप २७३६ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या २ लाख नजिक
काठमाडौं उपत्यकामा आज ७२३ सङ्क्रमित थप भएका छन् । काठमाडौं जिल्लामा ५३१, ललितपुर ६१ र भक्तपुर ५८ नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा आज थपिएका सङ्क्रमितमध्ये ३९८ पुरुष र ३२५ महिला रहेका छन् । उपत्यकामा हाल काठमाडौँमा छ हजार ६५०, ललितपुरमा एक हजार ४०४ र भक्तपुरका ५७५ सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस गण्डकीमा थप १२१ जनामा कोरोना, कुन जिल्लामा कति थपिए? (सूचीसहित)
याे पनि पढ्नुस नेपालमा सङ्क्रमितभन्दा निको हुने धेरै
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बढी भीड हुने किसिमका सेवा तथा कार्य अझै १५ दिनका लागि रोकिने बताए । उनका अनुसार, सिनेमा घर, रात्री व्यवसाय, अरू भीडभाड हुने स्थान, सभा, सम्मेलन, जुलुस लगायतलाई रोकिँदै आएकामा निरन्तरता दिन लागिएको हो ।
आजसम्म देशभरका ७७ जिल्लामध्ये पाँच जिल्लामा सङ्क्रमित पाँच सयभन्दा बढी छन् भने मनाङ र डोल्पामा शून्य रहेको छ । पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा झापा, ललितपुर, काठमाडौं, भक्तपुर र कास्की रहेका छन् ।